Umhlobiso kaKhisimusi Izinzwa zobuciko - imibono yasekhaya nengadi
Imibono kaKhisimusi. Umhlobiso kaKhisimusi. Imihlobiso kaKhisimusi. Umhlobiso kaKhisimusi. Kwenze ngokwakho umhlobiso kaKhisimusi.
Imibono yokuhlobisa kukaKhisimusi kusuka ezintweni zemvelo
Uma usuvele ukhathele ngemikhondo yobukhazikhazi neKhisimusi ekhazimulayo
Imibono Yomhlobiso KaKhisimusi onsomi
Umbala onsomi usabusa umkhuba wokuklanywa okungaphakathi,
Ukuhlobisa kukaKhisimusi ngezitika
Ukuhlobisa kukaKhisimusi ngezitika kungenye indlela yomhlobiso
Imibono yoKhisimusi wethebula likaKhisimusi woqobo
Sikunikeza imibono yokuhlobisa kwetafula likaKhisimusi elihlukile, nge
Yenza i-Wine Bottle Decoupage - Isipho SikaKhisimusi Sangempela
NgoKhisimusi, wonke umuntu ufuna indlela yokujabulisa abathandekayo futhi
Lona umqondo olula wokuhlobisa ubusika engadini, ikakhulukazi
Ungakuthinta Kanjani uNapkin KaKhisimusi |
Ezinsukwini zangaphambi kukaKhisimusi kunesimo esikhethekile sokulungiselela imfiva
Njengoba kusondele amaholide onyaka, konke okuphuma lapho kukhanya ngobuningi
Umhlobiso kaKhisimusi okhazimulayo namakhandlela
Izindlela zokuhlobisa itafula likaKhisimusi lapho kugxilwe khona
Umhlobiso wendebe kaKhisimusi
Umhlobiso omnandi nendebe kaKhisimusi omnandi. Kokuhluka kokuqala
Imibono eyisishiyagalombili yomhlobiso kaKhisimusi oyisitayela
Imibono eyethuliwe ingeyokuhlobisa kukaKhisimusi kumhlophe omhlophe. In
Zenzele indoda eyiqhwa yokuhlobisa uKhisimusi
Ividiyo engezansi inikeza umbono wokuthi singaba lula kanjani
Kwenze ngokwakho izibani zikaKhisimusi
Umbono othokozisayo wokwenza izibani zamabhaluni, amasofa,
UCrystal Christmas nguThomas Kincaid
UThomas Kincaid ungumdwebi waseMelika odumile wesikhathi samanje.
I-snowman ehlukile eyenziwe ngezinkomishi zepulasitiki
Ukwenza i-snowman ngaphandle kwezinkomishi zepulasitiki kuhle
Cishe wake wazibuza kaningi ukwedlula ukuthi: uhlala kuphi ngempela uSanta ?.
Zenzele umhlobiso we-silicone kaKhisimusi
Ukuzenzela izakhi zokuhlobisa kukaKhisimusi kuyingxenye
Zenzele umqulu wamaphepha kaKhisimusi
Ungazenza Kanjani Ukugoqwa KukaKhisimusi Wokuqoshwa Kwephepha,
Umoya kaKhisimusi eMelika
E-US, ukuqala kwamaholide wasebusika kusaphela
Umhlobiso wangaphandle kaKhisimusi
Iningi lakho selivele lihlobise ikhaya lakho
UDisemba wayehamba phambili izinyanga zasebusika. Amaholide okulindeleke kakhulu asondele
Ipulangwe leqanda leplastiki
Zenzele Umqhele KaKhisimusi Wamabhokisi Oplastiki Wokuthi
Amaholide omculo ajabulisayo kakhulu ayeza.
Imibono Yangempela KaKhisimusi Wesihlahla
Nazi ezinye iziphakamiso zesihlahla sikaKhisimusi.
Ikhasi le-1 kusuka ku-3123Okulandelayo »